DhDUO'n Jaarmayaalee Oromoo hunda waliin hojjachuuf qophii ta'uu isii ibsite - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured DhDUO’n Jaarmayaalee Oromoo hunda waliin hojjachuuf qophii ta’uu isii ibsite
DhDUO’n Jaarmayaalee Oromoo hunda waliin hojjachuuf qophii ta’uu isii ibsite
By Abdii F. Sabaa
DhDUOn marii Adaamatti geggeessaa jirtu irratti jaarmayaalee siyaasa Oromoo hunda, kanniin biyyaa fi biyyaan ala jiran, waliin hojjachuudhaaf qophii ta’uu isii ibsite. DhDUO’n murtee kanarra gayuun isii tankaarfii sirriiti. Ammas, murtiin DhDUO’n dabarsite kuni murtii Oromoo humneessu. Murtiin kuni murtii dantaa Oromoo tiksuu isaan dandeessisu. Tankaarfiin kuni hujitti jijjiirame taanaan tankaarfii qabsoo Oromoo sadarkaa itti aanutti ceesisuudha.
Jaarmayaaleen Oromoo biyyaa fi biyya alaa jiran lakkofsaan heddu. Kanniin biyya alaa jiran keessa ABO’n jaarmaya Woyyaaneen shororkeessaadha jettee labsite. Dhimma kana DhDUO’n bifa kamiin akka hujitti jijjiirtu ammatti beekamuu dhabus, kallattiin bulchiinsi Lamma Magarsaatiin kaayame kun gaarii fi hegeree Oromoof abdachiisaadha. Gochaan argisiisuun ammoo murteessaa fi waan yeroon itti laatamuu qabuu miti.
Labsii DhDUO kana ADWUI’n bifa kamiin akka ilaalu ammatti wanti beekamu hin jiru. Wanti labsame kuni eebba ADWUI irraa argateeti jechuun nama dhibus quba hin qaban jechuun ammoo rakkisaadha. Akkuma beekamu yeroo ammaatti humnoonni ADWUI keessa jiran kallattii garagaraatti wolharkisaa jiraachuun isaanii ifa. Tankaarfiin DhDUO kun ADWUI dhawaata dhawaataan gargar hiikkataa deemaa jiraachuu isaaf tarii agarsiisa biraati. #IsinWaliinJirra
Previous articleMagaalaan Ambo Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo’aa goote
Next articleUmmata Hammarreessaa irratti ajjeechaan suukkanneessaan raawwatame